Kulesi sihloko sizoxoxa ukudalwa amaphrofayli, okuyinto zingaphendulwa ngaphandle washesha. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ngesikhathi abaphendula inhlolovo nge-Internet nganoma yisiphi isikhathi ukuze asuke ikhompyutha. Ngokuvamile-ke kwenzeka ngesikhathi isizathu okungahleliwe. Emuva futhi ngokushesha ukukhumbula lokho wayesanda wahlanganyela, kuyoba nzima ngempela. Njengoba kulesi simo ukuze afeze ngempumelelo enkulu yocwaningo?
Yiziphi izici encike kakhulu isikhathi impendulo lemibuzo?
Okokuqala, inani imibuzo. Khona-ke, kusukela izindaba zekhwalithi. Ekugcineni, kusukela imihlobo yemibuzo.
Manje ake sihlole ngokuningiliziwe isici ngasinye.
Inani imibuzo lemibuzo incike inani ukwaziswa esikudingayo ukuze uthole ku responente. Ukuze online inhlolovo lemali kahle imibuzo kusuka emihlanu kuya kweyishumi. Kulokhu kakhulu inani elikhulu izimpendulo umbuzo owodwa ngokuvamile okuhlale kukhona kunciphisa izinga izimpendulo phendulela ulwazi. Inombolo kahle izimpendulo umbuzo owodwa - kusukela amabili kuya kwamahlanu.
Indlela ukunciphisa inani imibuzo? Kungcono ukuba uzinikeza izimpendulo ezingakhetha kuzo, efana nomunye, udinga Ngokuphambene eqinile. Ngokwesibonelo, "yebo", "cha", "cishe akukho", "yebo kunalokho," "ukungabaza" lisho.
Zama ukugcina imibuzo kanye nezimpendulo eziye zavela ngokucacile, akazange avumele ongakhetha incazelo. Gwema amagama-ncazo eside ongaqondakali ukuthi uthathe isikhathi ophendulile. Ngokwesibonelo, "ugwayi wakho owathandayo" esikhundleni "Hlobo luni kugwayi Ucabanga bakhetha ukuthenga ngalesi sikhathi sonyaka."
Indlela ukukhulisa izinga lemibuzo? Okubeka imibuzo nezimpendulo njengoba kulula ngangokunokwenzeka. Kulokhu, ungayisebenzisi imigomo usithe izifinyezo ezingase ukudida kummangalelwa. Khumbula ukuthi lo muntu ophethe imibuzo yakho kungaba otlichatsya kakhulu kuwe.
Imihlobo yemibuzo - lokho ukukhetha
ukukhetha esibi uhlobo umbuzo kungaba ukwandisa isikhathi adingekayo impendulo. Ngokwesibonelo, njengoba ungacela mayelana ezingeni ophendulile lemfundo.
Okuhle kunakho konke ukuthi imibuzo multiple-choice.
Khetha izinga lakho kwefundo:
Noma baphendule ngokuthi "ezinye", okuyilona elidingekayo ukuze uthayiphe ibhokisi lombhalo.
Inketho yokuqala nje elula, kodwa futhi kuthatha isikhathi esincane. Eyesibili kuthatha ummangalelwa Wawuthatha cishe nambili imizuzwana isikhathi, futhi kahlanu esikhulu kunesokuqala. Uma ummangalelwa uphendula idivayisi yeselula, iqoqo izincwadi kuzothatha isikhathi eside.
Kunezindlela eziningana izici ezithinta isikhathi ngokugcwalisa lemibuzo. Khumbula ukuthi awukwazi nemibuzo eminingi kakhulu e iphrofayela yakho, uhlobo umbuzo kumele kuhambisane Imininingwane edingekayo ukuze bathole, kanye nemibuzo kufanele kube elula ngefomu kummangalelwa waphendula ngokushesha.
Ngaphezu kwalokho, i-oda imibuzo futhi nendima enkulu kudalwa amaphrofayli. Okokuqala, kubalulekile ukuba imibuzo iqembu ngezihloko efana abaphendulayo ukuchitha isikhathi okungenani e aphuma umbuzo eyodwa kuya kwenye. Okwesibili, kudingeka abe imibuzo kusuka kulokulula kufika kulokulukhuni, hhayi okuphambene nalokho. Ekugcineni, nengxenye-block ubudala imfundo wanquma ukubeka ekupheleni lemibuzo.
Indlela baba izikhangiso kwi "Julia": a enemininingwane incazelo